Global Voices teny Malagasy » Manandratra ny firaisankina ao anatin’izao krizin’ny COVID-19 izao ny hiran-tahaka nalaza tamin’ny Eurovision avy ao Moldavia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Mey 2020 10:13 GMT 1	 · Mpanoratra Metamorphosis Foundation Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Moldavia, Fahasalamàna, Hafanàm-po nomerika, Hehy, Mediam-bahoaka, Mozika, COVID-19
Pikantsary avy amin'ny video  YouTube “Mom, stay home,” [Neny, mitoera an-trano] avy amin'ny tetikasa Sunstroke Project.
Ny tantara etoana dia nivoaka voalohany tao amin'ny Meta.mk News Agency , tetikasan'ny Metamorphosis Foundation. Navoaka eto ambany ny endrika nasiam-panovana noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty. Zahao ny pejy manokan'ny Global Voices momba ny fiantraika manerantanin'ny COVID-19 .
Nohiraina tamin'ny fiteny rosiana sy romaniana izy ity ary navoaka YouTube  nasiana dikantsoratra anglisy.
Tamin'ny alalan'ny fifaninanan-kira Eurovision tamin'ny taona 2010 no nanombohan'ny Sunstroke Project raha nampifaninana ny hirany mitondra ny lohateny hoe “Run Away.” Na dia naka ny laharana faha-22 — tamin'ireo 39 nifaninana — aza ny hira dia nalaza aoka izany. Amin'izao fotoana izao ny lahatsariny ofisialy  dia nahazo jeripejy mihoatra ny 10 tapitrisa ao amin'ny YouTube.
Namokatra sary-sy-soratra (meme ) [mg] malaza ihany koa io hira natao tamin'ny Eurovision io: ny saxophonistan'ny tarika, Sergej Stepanov, no ilay “Epic sax guy ,” ilay sary-sy-soratra mbola malaza  hatramin'ny androany, ka ampolony ny karazan-tsary  nivoaka.
Noho ny lazan-dry zareo tamin'ny aterineto, nifaninana ho solontenan'i Moldavia indray ny Sunstroke Project tamin'ny Eurovision 2017, tamin'ny hirany mitondra ny lohateny hoe “Hey Mama”  nahitana tonony tamin'ny teny anglisy. Mbola nahitana “solo” tamin'ny sax ihany ny hira tamin'ity indray mitoraka ity.
Nokasaina hotontosaina tao Rotterdam, Holandy, amin'io volana mey io ny fifaninanana Eurovision taona 2020, saingy nofoanana  noho ny areti-mandringana COVID-19.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/05/04/147541/
 lahatsariny ofisialy: https://www.youtube.com/watch?v=pHXDMe6QV-U&feature=emb_title
 sary-sy-soratra mbola malaza: https://www.youtube.com/watch?v=G1IbRujko-A